कच्चा लेजोजोल (फसरा) पाउडर (112809-51-5) hplc≥98% | AASraw
लेजोजोल (फ्लोरा) पाउडर
/ उत्पादन / पीसीटी ड्रग्स / Letrozole (Femara) पाउडर
SKU: 112809-51-5. श्रेणी: पीसीटी ड्रग्स
AASraw ले लेजोजोल (फिरारा) पाउडर (112809-51-5) को सीजीएमपी विनियमन र ट्रयाकिड गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत ग्यामबाट संश्लेषण र उत्पादन क्षमताको साथमा छ।
लेजोजोल (फ्लोरा) पाउडर भिडियो
लेजरोल (फर्मारा) पाउडर आधारभूत क्यारेक्टर
आणविक वजन: 285.31
पिघल प्वाइन्ट: 181-183 ° C
स्टेरियोड्स चक्रमा रोरोलेल (फ्लोरा) पाउडर प्रयोग
जेनेरिक नाम: letrozole (roe zol LET)
ब्रान्ड नाम: Femara (CAS 112809-51-5)
(फेरोरा पाउडर) लेजोजोल पाउडर प्रयोग
एक सामान्य दिशानिर्देशको रूपमा, म 0.36 मिलीग्राम / दिनको आधारमा एनालिक स्टेरॉयड चक्रको लागि आधार राशिको रूपमा सिफारिस गर्छु, जस्तै कि 200-300 मिलीग्राम / हप्ताको टेस्टोस्टेरोनको मामूली मात्राको साथ। 750 मिलीग्राम / हप्ताको एक उच्च खुराकमा, यस रकम सामान्यतया दबाइन्छ। सामान्यतया 1 मिलीग्राम / दिनको लागी कुनै पनि लिन सकिन्छ जब सम्म रक्त परीक्षणले त्यो स्तरमा असामान्य उच्च एस्ट्रायडोललाई पनि देखाउँछ, तर यो शायद नै छ।
चेतावनी (फ्लोरा पाउडर) लेजोजोल पाउडर
यद्यपि यो सम्भव छैन कि एक पोस्टमेनपोस्सी महिला गर्भवती हुने गर्दछन्, फसराले गर्भवती बच्चालाई हानि सकेन। यो दवाई नदिनुहोस् यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा गर्भवती हुन सक्छ। प्रभावकारी जन्म नियन्त्रण प्रयोग गर्नुहोस् यदि तपाईं विगतको रजोनिवृत्ति हुनुहुन्न भने, र यदि तपाइँ उपचारको बेला गर्भवती हुन्छ भने टाढाको डाक्टरले तुरुन्तै।
यो ज्ञात छैन कि आइजोजोलले स्तन दूधमा पास गर्दछ वा यदि यो एक नर्सिङ बच्चालाई हान्न सक्छ। तपाईं मासुरा प्रयोग गरिरहनु भएको बेलामा स्तनपान हुँदैन।
अन्य ड्रगहरूले आइपोजील र ओभर-काउ-काउन्टर औषधिहरू, भिटामिन र हर्बल उत्पादनहरू सहित letrozole सँग कुराकानी गर्न सक्छन्। तपाईको औषधि हेरचाह गर्ने प्रदायकहरूलाई प्रत्येक औषधिको बारेमा बताउनुहोस् जुन तपाईले प्रयोग गर्नुहुने छ र तपाइँले प्रयोग गर्ने वा रोक्न कुनै पनि औषधि।
आइजोजोज / फेरोरा कच्चा पाउडर (सीएएस एक्सएनक्स-एक्सएनक्स-एक्सएनएक्स)
(फसरा पाउडर) Letrozole पाउडर मार्केटिंग
IV। कसरी पुष्प पाउडर (सीएएस 112809-51-5) खरीद गर्न: AASraw देखि Letrozole पाउडर खरीद?
एएएसले शुद्धता 98% लाई चोट पुर्याउनुपर्ने उपयोगको लागि शरीर बिरुवा वा भूमिगत प्रयोगशालाहरूमा कच्चा पाउडर लाईज प्रदान गर्छ।
Letrozole / Femara कच्चा पाउडर व्यंजनहरू
Exemestane (Aromasin) पाउडर